Isikhokelo sokuqeqeshwa kwePython kubaQaleli-ITS Tech School
Isikhokelo sokuqeqeshwa kwePython kubaQaleli
Isikhokelo sokuqeqeshwa kwePython:I-Python yimiqathango phakathi kweelwimi eziqhelekileyo eziziwayo kwiplanethi kwaye abaninzi abantu bacinga ngokufunda ukugcinwa kolwimi engqondweni injongo yokuphela ukuxhasa inkxaso yabo yithuba lomsebenzi nge-association ebalulekileyo ye-IT. Ulwimi lwenkqubo lukwindlalelo yonke indawo kwaye ngenxa yemeko yalo evulekile ebonisa ukuba inxaxheba enkulu ekuphuculeni ukuphuhliswa, amaseva ekupheleni, i-Xml parsing, ukuhlanganiswa kwesakhelo kunye nakwezinye izixhobo zokucwangcisa. Ukongeza kwinjongo yale lwimi yolwimi kukuba yinto elula kakhulu yokufunda nokunceda ekusebenziseni ngokubanzi imisebenzi.
Iingcebiso zePython Training
Sebenzisa i-Interpreter Well
Zama ukunganqikazi ukucela uncedo lwenkonzo
Uqeqesho oluqhelekileyo okanye inkampu yoqeqesho
Beka izibonelelo kwiiprojekti ezivulekileyo
Kukho iintlobo ezimbini ezihlukeneyo zePython (2 kunye ne-3) kwaye kuya kufuneka ukhethe ukuba ubani uya kukunceda kakhulu kuncike kwiikhono ozifunayo ukuze ufumane umsebenzi wakho okanye insimu yokufaneleka. Zomibini izinto ezihlukeneyo zijolise kakhulu kwaye zibuhlungu ngokukodwa kwimeko yesicwangciso kwaye unokwenza uhlolisiso lwakho malunga nababini ukuba ukhethe ukuba ngubani oya kujongela ngokubhekiselele kwixesha elithile.
Itokiki inokuqhuba iikhowudi zakho kwaye ikunike izikhokelo ngokufanayo; ukwenzela ukuba iikhowudi kufuneka ziqhube phambili kunye nokuba zibukeka njani zifana nokusebenza. Ukuya kwizigaba zokuqala Qeqesho lwePython, oku kunokukunceda ngokuqinisekileyo. Itokiki inika ukuqhutyelwa kwee-samani eziqhubekayo okwaneleyo ukukunika ikhanda kuqala kwiinkqubo zePython.
Ukufunda olunye ulwimi lwenkqubo alunakuze lube lula kwaye kuya kubakho amaxesha apho uya kugcina kwiikhowudi ezimbalwa kunye neemeko. Unokukhangela uncedo olungundoqo kumhlobo we-Python ukudala kuluntu kwi-web space kwaye basebenzise amandla abo ekunqobeni izigaba ezibalulekileyo zePython Programming yakho.
Ukuba uneneni lokwenene malunga nokufunda ulwimi lwenkqubo, kufuneka ukuba unganqikazi ukufumana uqeqesho olusemthethweni okanye ukugqiba kwikhosi kwezinye izakhiwo zokuqeqesha. Akukho zindlela ezingakumbi xa ufuna ukufaneleka kwesimo seburhulumenteni kunye nesibonelelo esiphezulu sokuqeqeshwa kweeklasini kunokukubeka ngokubanzi kwaye kuxhomekeke kwiimeko ezibuhlungu kakhulu kwiilwimi zolwimi ngokuchanekileyo. Yenza uphando lwakho oluthile kwaye uthathe ikhosi okanye ubungqina okanye nayiphi na uhlobo loqeqesho olusemthethweni ukuphucula izikripthi zakho zokucwangcisa kwi-supervision yeengcali ukuze ukwazi ukuphuma rhoqo.
Ekuvukeni kokufunda okanye ukufumana isingatha kwiimpawu kunye neebhanti zolwimi, unokubeka ithuba lakho kwiiprojekti ezivulekileyo zeprojekti evulekileyo, njengoko ezi ziza kukunceda ukuba uzixhase kwaye uziqonde ezinye iikhowudi zabantu, nangona kunjalo uya kukunika Amathuba okwaneleyo okufaka isandla kunye nokuphucula amakhono akho okubhala ngokukodwa. Akukho sizathu esichukumisayo sokuziva uhlazekile malunga nekhono lakho lokubhala njengegalelo kubo bonke ixesha liya kubakhuthaza ngokugqibeleleyo ixesha.
Bona kwakho :I-ITIL yeSatifikethi - Isikhokelo esigqibeleleyo
Izinto ze-10 Okufanele Uzazi Ngo-R, Python, no-Hadoop